လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း | BurmeseAsia
Home Celebrities လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်း
လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ စစ်တပ်ဘောမ ယုန်လေးကို ထိမိပိုင်နိုင်တဲ့ စကားလုံးဖြင့် ဒဲ့ဆဲချလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးဆိုတဲ့ ပါလေရာငါးပိချက်ကတော့ ပြန်ပေါ်လာပြန်ပါပြီနော်။ သူလုပ်သမျှတွေက လူတွေအဆဲခံရအောင်ကို တမင်လုပ်နေသလိုပါပဲနော်။
အခုလည်း မင်းသားမင်းမော်ကွန်းက သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်တာကြောင့် ထိမိစွာဖြင့် ဆဲလိုက်ပါပြီနော်။ ယုန်လေးကလည်း သူ့အပေါ်ဆဲဆိုနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဆ ရာကြီးလုပ်ကာ ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ဒါကျွန်တော် အချစ်ဆုံး အစ်ကို ထဲက တစ်ယောက်ကိုမင်းမော်ကွန်းပါ .ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းအားပေးတယ်ငါတို့ အားလုံးရဲ့ မြေ သီချင်းတုန်းကလဲကျွန်တော့် ဘက်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ အစ်ကိုပါ တခြားလူတွေဝိုင်းဆဲတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူခံ နိုင်ရည်ရှိတယ် အရည်ထူနေပါပြီ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ ဆဲတာတော့ စိတ်ထိခိုက်ပါတယ်။အစ်ကို ကျွန်တော် စိတ် ကို သိပါတယ် .ကျွန်တော့် ဘယ်သူ့ကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖူးလို့လဲပြောလို့ မကောင်း မပြောချင်တဲ့ အရာတွေကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက်ကူနေပါတယ် ။
ကူဖို့ကလည်း တစ်ချို့ တန်းလန်းတွေ ပါ .ပြောမှ သိတော့ မှာမို့လို့ ပြောရပါတော့မယ်အနုပညာ သမားတိုင်းလိုလို ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် ပါဝင်တဲ့ အနုပညာသမားတွေကိုကယ်စေချင်တာလားထောင် နှစ်ရှည်ကျတဲ့လူကျ . တောထဲ သေတဲ့လူသေ။ဘဝ ပျက်တဲ့ လူပျက် . ပြီးတော့မှ .စစ်တပ်က ယုတ်မာခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းများဘွဲ့ဆိုပြီးပေးစေချင်တာလား .အကုန် ပျက် စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကိုအားမပေးတာကျွန်တော် သိပါတယ် အခု သွေးဆူနေလို့ ဆိုတာလည်း သိပါတယ် ။ဖြစ်စဉ်တိုင်းကို သေချာ စဉ်းစားရင်ရပါပြီ .ပြည်သူ့ဘက်က ရှေ့ဆုံးက ပါခဲ့တဲ့အနုပညာသမားများကို အခုလို ဝရမ်းပြေး မအေးချမ်း ဘယ်သူ့မှ မဖြစ်စေချင်ဘူးမှတ်လားကျွန်တော် သိပါတယ် သူတို့ ပြန်အေးချမ်းဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ် . သူတို့အိမ် သူတို့ယာ။
တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တကယ်ကြီးကို အားထည့်ပြီး ပါဝင်ခဲ့ကျပြီးပြီလေဒုက္ခထပ်ရောက်စေချင်တာလား .အေးအေးချမ်းချမ်း ပဲ မြင်ချင်တာလား .စဉ်းစားပေးကျပါ .ထူးခြားကို စစ်ကား ၁၀စီးလောက်နဲ့ ပိတ်အဖမ်းခံရတာအားလုံး အားလုံးထပ် စောပါတယ် .နောက်တစ်နာရီ နေ ထပ်ပြီး ပြောပါမယ် မြင့်မြတ် အိမ်ထဲ ကို စစ်အင်အား ရဲအင်အား အလုံးရင်းနဲ့ ဝင်တာတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
Previous articleသတ္တိရှိရင် သေနတ်ချင်းယှဉ်မယ် ဆိုပြီး PDF တွေကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဘူးလက်လှဆွေ
Next articleသားထိသွားပြီ လို့ အမေကို ဖုန်းဆက်ပြီး နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ထင်ရှားပြည့်လျှံဦး
© 2020 Co[email protected]